Shuruudaha Qalinjabinta Dugsiga Sare | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dibloomada 'Minnetonka' waxay astaan u tahay heer wanaagga tacliimeed iyo hanashada shaqsiyeed ee nidaamka ugu sarreeya.
Aragtida Gudiga Dugsiga
Si loo helo diblooma Dugsiga Sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
Buuxi dhibcaha koorsooyinka soo socda ee loo baahan yahay (0.5 dhibco = hal semester)
Mawduuca Heerarka Xusuusin
Ardaydu waxay ku buuxin karaan buundada Farshaxanka iyada oo loo marayo fasalo kala duwan. Deyntan waxaa lagu buuxin karaa fasal kasta, markaa horay u fiiri oo dooro koorsooyinka (sidaha) ugu habboon danahaaga. Eeg Liiska Koorsada Dhibcaha Farshaxanka .
Ardaydu waa inay dhammaystiraan Algebra Sare, oo u dhigma, ama heer sare ah, oo qayb ka ah saddexda-amaah ee looga baahan yahay.
Hal dhibic waa inuu ahaadaa amaahda cilmiga bayoolajiga, hal deynna waa in lagu kasbadaa Chemistry ama Physics.
Tacliinta Caafimaadka waxay kuxirantahay barnaamijka wax barashada inta ardaydeenu socdaan afarta sano. Ku guuleysiga dhammaystirka dhammaan barnaamijka caafimaadka afarta sano ah ayaa looga baahan yahay qalin-jabinta. (Ardaydu iskama diiwaangeliyaan Caafimaadka; dhammaan ardayda si otomaatig ah ayaa loo diiwaangeliyaa.)
Waxbarashada jimicsiga jirka 1.0
Ardayda leh koorso buuxda oo dhamman afarta sano waa laga dhaafi karaa 0.5 dhibcaha Waxbarashada Jimicsiga.
Cilmiga Bulshada 3.5
Saddex dhibcood waa inay raacdaa taxanaha fasalka 9aad ilaa 11aad; 0.5 dhibcaha waa inay ahaadaan koorsada 12aad ee Daraasaadka Caalamiga / Dhaqaalaha G, ama koorso AP / IB ah oo la doorto. Cilmu-nafsiga G ama Sociology G waa la qaadan karaa marka lagu daro 3.5, laakiin ma buuxin doono shuruudaha qalin-jabinta ee Daraasaadka Bulshada.
Wadarta Dhibcaha Loo Baahan Yahay 22.5
Ballamada La-talinta MHS